Global Voices teny Malagasy » Tonga Ny Ririnina: Miomana Hiatrika ny Vanim-potoanan’ny Zavon-Tsetroka Indray I Balkans · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Novambra 2016 16:22 GMT 1	 · Mpanoratra Elena Nikolovska Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Bosnia Herzegovina, Holandy, Makedonia, Norvezy, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Nandritra ny roa taona farany, nahatratra ny ambaratonga mampidi-doza ny fahalotoan'ny rivotra manerana ny tanànan'i Balkans. Nantsoina  ho tena tanàna maloto rivotra indrindra any Eoropa i Sarajevo sy i Skopje: nangataka ny tanàna ny tanora ao Skopje hametraka zotram-pitaterana fanampiny amin'ny alina tamin'ny alalan'ny fametrahana tranolay eny amin'ny garam-piara fitateram-bahoaka  manerana ny tanàna, ary nanao hetsi-panoherana hisian'ny lalana azo antoka kokoa eny an-dalana  sy fotodrafitrasa ho an'ny mpandeha an-tongotra sy ny fitaterana tsy misy maotera tsara kokoa ny mpandeha an-tongotra sy ny mpandeha am-bisikileta avy ao Skopje.
Mandeha amin'ny solika ireo fiara ka mamoaka gazy karbonika be dia be, miteraka ny fahalotoan'ny rivotra sy mampidi-doza ny fahasalaman'ny olona ireo singa fandotoan-drivotra  sy ireo karazana etona rehetra mahafaty ireo. Nanamafy izany tamin'ny COP21 , natao tany Paris tamin'ny 2015 nandritra ny zaikaben'ny fanavaozana maharitra sy ny fihaonambe mikasika ny fikorontanan'ny toetrandro, ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana Eran-tany (OMS) tamin'ny alalan'ny Dr. Carlos Dora fa olona maherin'ny fito tapitrisa no maty isan-taona noho ny aretina mifandraika amin'ny fahalotoan'ny rivotra, ary ny solika no antony tena lehibe mahatonga ny fahalotoan'ny rivotra.
“Rehefa miresaka fitaterana ianao, ny làlana avy hatrany no tonga ao an-tsain'ny olona . Kanefa isika tsy mila lalana hafa intsony. Tsy maintsy manangana fitateram-bahoaka tsara kokoa isika, ary mila mampieritreritra ny olona amin'ny fitaovam-pitaterana hafa, toy ny bisikileta sy ny fandehanana an-tongotra, “hoy i Carlos Felipe Pardo avy ao amin'ny Despacio , fikambanana iray tsy mitady tombontsoa izay manao fikarohana mikasika ny kalitaon'ny fiainana.
Na izany aza, tamin'ny tapaky ny volana Jolay 2016, nanambara  ny ben'ny tanànan'i Skopje, Atoa Koce Trajanovski, fa hanaovana fanorenan-dalana vaovao 9000 metatra sy lalambe ao an-drenivohitr'i Makedonia ny vola 17 tapitrisa Euro ho fepetra hanatsarana ny tontolon'ny fihariana ao amin'ny firenena. Tsy nilaza na inona na inona amin'ny fanomezana vahaolana hafa amin'ny fitateram-bahoaka na fandrisihana ho an'ireo izay mandeha bisikileta na mandeha an-tongotra rehefa mivezivezy manerana ny tanàna.
Firenena iray izay mampiseho ny fomba hanatsarana kokoa ny toe-javatra toy izany i Norvezy — nanome ohatra  tamin'ny fampiasana ny fiara mandeha amin'ny herinaratra eny amin'ny arabe izy, amin'ny alalan'ny fandrisihana toy ny fanafoanana ny hetra sy ny fanomezana fiantsonana maimaim-poana ho an'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra. Ankehitriny, mihoatra ny iray ampaha-dimin'ny varotra fiara vaovao ao Norvezy no fiara mandeha amin'ny herinaratra . Firenena manana bisikileta maro indrindra isan'olona  ihany koa i Norvezy, Soeda, Alemaina sy Holandy, ary samy manana tambajotra midadasika amin'ny lalan'ny bisikileta ao amin'reo tanandehibeny, ahitana lalana ho an'ny bisikileta mifanila amin'ny ho an'ny fiara.
Nahena hanomezan-toerana ireo trano lehibe vaovao handraisana ny fitomboan'ny mponina ireo faritra maitso ao an-tanandehibe manerana ny Balkans, nilaza anefa ny manam-pahaizana fa ny fahavitsian'ny drafitra an-drenivohitra sady tsy manara-penitra no olana. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny governemanta eo an-toerana ireo mpikatroka sy ny olom-pirenena any amin'ny tanàna be rivotra maloto indrindra ao Makedonia toa an'i Skopje  [mg] sy i Tetovo  [mg].
Nametraka zaridaina maitso mitsangana [mihantona] antsoina hoe “Tanàna Hazo” ao amin'ny tanàna izay samy manana tahan-drivotra maloto avo — ao Skopje sy Tetovo — ny fikambanana Makedoniana tsy miankina amin'ny fanjakana Eko-svest  mba ho fanairana amin'ny maha zava-dehibe ny faritra maitso ao an-tanàndehibe. Fa nilaza mazava i Ana Colovic Leshoska ao amin'ny Eko-svest nandritra ny valan-dresaka ho fampiroboroboana ny tetikasa hoe: ” tsy solon'ireo hazo akory ny Tanàna Hazo satria tsy misy mahasolo ny hazo.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/07/91540/
 fametrahana tranolay eny amin'ny garam-piara fitateram-bahoaka: http://www.radiomof.mk/mladite-baraat-povekje-nokjni-avtobuski-linii/
 nanao hetsi-panoherana hisian'ny lalana azo antoka kokoa eny an-dalana: http://brif.mk/?p=191760
 singa fandotoan-drivotra: https://www.epa.gov/pm-pollution
 bisikileta maro indrindra isan'olona: http://top10hell.com/top-10-countries-with-most-bicycles-per-capita/